Tonga teto Madagasikara izy io tam 11 martsa avy any Kenya, ka tonga tao Antsohihy tamin’ny 19 martsa. Maka sary any amin’ny kaominina Ambahivohitr’I Befotaka-Nord izy io. Izay tanana andehanany dia mandroaka azy avokoa .Nosamborina tao amin’ny Fokontany Antsahafaly, Kaominina Befotaka izy io ny sabotsy teo, ary notazonina ao amin’ny Paositry ny zandarimariam-pirenena ao Befotaka-Nord amin’izao fotoana izao; nanao fanadihadiana azy ny Mpitsabo fa mbola tsy mahita marika aloha hatreto. Nanao tatitra tany amin’ny lehibeny io Mpitsabo io kanefa ny valiny azo dia hoe tazony ao aloha kanefa sady tsy manana fanafody ny aty no tsy manana fitaovana, hoy ny fampitam-baovao. Sahirana izahay Polisy sy ny zandary ary ny Ben’ny tanàna, tsy hita ka manaitra ny fanjakana, hoy izy ireo.